ရေသည်ပြင်ပမှ ဦး ဆောင်သောဒီဂျစ်တယ်နံရံမျက်နှာပြင်ကိုမတော်တဆဝင်မိလျှင်ဘာလုပ်ရမလဲ - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ဦး ဆောင်သော LED ပေးသွင်းသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ၏သိုလှောင်ရုံများ၌ရေများကျဆင်းခဲ့သည်, အဆိုပါ LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်၌ရေကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်; ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများမကြာခဏဖြစ်ပျက်မှုအတွက်, ဒီမှာထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများကြုံတွေ့ရဖို့အတိအကျရှင်းပြချက်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်:
1. အမြန်ဆုံးမြန်နှုန်းဖြင့်ရေထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသော LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်ကိုခြောက်သွေ့စေရန်ပန်ကာတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုပါ.
2. The ပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်မျက်နှာပြင် နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အခြောက်ခံပြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်သရုပ်ြပများနှင့်အသက်ဖြစ်ပါတယ်. အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းတိကျတဲ့ခြေလှမ်းများဖြစ်ကြသည်:
က. တောက်ပမှုကိုညှိပါ (အဖြူရောင်ပြည့်သည်) ရန် 10%, အတွက်အိုမင်းခြင်း 8-12 ပါဝါပြီးနောက်နာရီ.
ခ. တောက်ပမှုကိုညှိပါ (အဖြူရောင်ပြည့်သည်) ရန် 30% နှင့်အပေါ်ပါဝါနှင့်အသက် 12 နာရီ.
ဂ. တောက်ပမှုကိုညှိပါ (အဖြူရောင်ပြည့်သည်) ရန် 60%, အတွက်အိုမင်းခြင်း 12-24 ပါဝါပြီးနောက်နာရီ.
ဃ. တောက်ပမှုကိုညှိပါ (အဖြူရောင်ပြည့်သည်) ရန် 80%, အတွက်အိုမင်းခြင်း 12-24 ပါဝါပြီးနောက်နာရီ.
င. တောက်ပမှုကိုညှိပါ (အဖြူရောင်ပြည့်သည်) ရန် 100%, နှင့်အဘို့အအိုမင်း 8-12 ပါဝါပြီးနောက်နာရီ.
အထက်ပါအဆင့်များပြီးစီးပြီးနောက်, LED display screen သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာလိမ့်မယ်; သို့သော်, အောက်ပါအချက်များကိုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အာရုံစိုက်ရပါမည်:
1. သင်ဂိုဒေါင်တစ်ခုသို့မဟုတ် LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၌ရေကိုရှာဖွေတဲ့အခါ, သင်ချက်ချင်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်သည်နှင့်နှောင့်နှေးကြပါဘူး.
2. ရေထဲသို့ ၀ င်လာသည့် LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်များစီစဉ်ပါ.
3. လေသေတ္တာထဲကိုရောက်သွားတဲ့ LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ကိုယ်ထည်ကိုမထားပါနဲ့, LED မီးကိုပြုလုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်.
4. ရေဂိုဒေါင်ထဲသို့ဝင်သောအခါ, လေထုသေတ္တာရေဝင်လိမ့်မည်. သေတ္တာတပ်ဆင်ပြီးနောက်တွင် LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်သို့အစိုဓာတ်မ ၀ င်လာစေရန်လေထုသေတ္တာများအားလုံးကိုနေဖြင့်ထိတွေ့သင့်သည်.
5. ရေဖုံးနေသော LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်များအားလုံးကိုအချိန်မရွေးကိုင်တွယ်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည်မျက်နှာပြင်၏တည်ငြိမ်မှုကိုပိုမိုဆိုးရွားနိုင်သည်. အရေးပေါ်ကုသမှုစဉ်အတွင်း, မျက်နှာပြင်ပေါ်ကစွမ်းအင်သုံးစွဲပြီးနောက်မျက်နှာပြင်သည်ဆက်တိုက်သေဆုံးနိုင်သည်. ကျေးဇူးပြုပြီးသူဌေးအားလုံးကိုဂရုစိုက်ပါ. စစ်တမ်း.